भाइरस फैलाउने दश देस ,जहाँ चमेरोको मासु BAT मार्केट - A complete Nepali news portal based on news & views
भाइरस फैलाउने दश देस ,जहाँ चमेरोको मासु BAT मार्केट
२३ चैत्र २०७६, आईतवार १०:५४ April 5, 2020 Buddha Sharan
चैत्र २३ ,काठमाडौँ । कोरोना भाइरसले अहिले पूरै बिश्वमा त्रासमय बिसम परिस्तिथि श्रृजना गरेको छ । चीनबाट फैलिएको यो वायरसले यस समय पूरै बिश्वलाई नै संकटमा परिसकेको छ । यो भाइरस जानवरबात मानिसमा फैलिएको हो । यो भाइरस कुन कुन जानवरमा पाइन्छ भन्ने बिषयमा विश्व भरका वैज्ञानिकहरु अनेकौ आकलान गरिरहेका छन् । बैज्ञानिकहरुको खोज र स्वस्थ्य बिशेसज्ञले चमेरोमा नै यो भाइरस रहेको तथ्य निस्किएको छ ।
मुख्य गरि चमेरो जस्तो दुर्लभ जानवरको मासु बात नै कोरोना भाइरस बिश्वमा फैलिएको बताइन्छ । यस्को बावजूद पनि बिश्वमा झन्डै दस देश जाह अहिले पनि चमेरोको मासुको ब्यबसाइक रुपमा चलेकै पाईन्छ ।
चीन बाहेक थाइलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, हङ्कङ्ग्, सिंगापुर, साउथ कोरिया र जापानमा यस किसिमको ब्यबसाय हुने गर्छ । यूएनले तयार परेको एक रिपोर्टको अनुसार यी जंगली जानवरमा हरेक बर्षको व्यापार हेर्दा 2016 मा 1.4 लाख करोड़ रहेको र , जुन 2018 मा7लाख करोड़ सम्म बृद्दी भएको थियो ।
चीनको कुरा गर्दा , चीनको गुआंगडौंग वेट मार्केट भएको उक्त बजारमा जहा अजीङ्गर, कछुए, छेपारो , मुसा , कमिलाका लार्ब , चमेरो ,पैंगोलिन, स्यालको बच्चे, जंगली बिरालो , गोही जस्ता जानवरकाे मासुको ब्यबसाय हुने गर्छ । (Photo- Reuters)
चीनको यो बजार बाट सन् 2002 मा सार्सनामको सक्रमण रोग फैलिएको थियो । सार्स रोगको कारण 26 देशका 8,000 मानिसमा संक्रमित भएका थिए ।. बिशेसज्ञका अनुशार मानव जातिका लागि यो कोरोना भाइरसकाे पहलाे आक्रमण रहेको हो । तत्काल फैलियेलो यो संक्रमण पछि चीनले केहि दिनकालागि यो बजार बन्द गरिएको थियो । तर केहि समय पछि पुनः बजार खुल्ला गरिए ।
कस्तो हुन्छ चमेरो BAT मार्केट ?
यस्ता व्याट मार्केट ( चमेरो मासु बजार )मा जीवजंतुको खुल्लामा राखी कातमार गरिन्छ । यीनै जानवरका रगत, दिसा ,फोहर जन्य बस्तु पानीमा मिसिएर संक्रमण भाइरस बन्दछ । यस्ता जताततै फ्याकिएका बिकार फोहरमा बिकसित हुने बजार क्षेत्रमा मानिसहरुको भिडमा सक्रमणले मानिसको शरीरमा सजिलै प्रवेश गर्ने गर्छ ।
https://aajtak.intoday.in/gallery/coronavirus-covid-19-and-wet-market-of-ten-countries-including-china-tstg-6-47964.html – बाट साभार गरिएको
बाँदरको सिकार खेल्न गएका राउटे किशोरको भिरबाट लडेर मृत्यु
करोडौ ठगीको आरोप लागेका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष न्यौपाने पक्राउ
टेस्लाका इलोन मस्क बिल गेट्सलाई उछिन्दै भए ३५ औं स्थानबाट उक्लेर दोस्रो धनी
मेसीबिनै बार्सिलोनाले ४–० ले हरायो डायनाभो किभलाई
बर्दिवासमा प्रहरीको गोली लागेपछि हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं पुर्याइएका युवकको मृत्यु
बलात्कार पछि हत्या आशंका गरिएकी बालिकाको शव प्रहरीले खाेस्याे : झडपमा ३ घाइते
कोरोना परीक्षणको व्यापकता बढाउन काँग्रेसको आग्रह